रिटेल + स्थानीय खोज = विशपन्ड | Martech Zone
निस्सन्देह कि ईकामर्सले रिटेलमा ठूलो प्रभाव पार्दै छ ... तर तपाईंको मोनिटर कति ठूलो छ, यसले रिटेल आउटलेटमा हिड्न र उत्पादनलाई छोड्ने विकल्प दिदैन। न त नि: शुल्क शिपिंग सँधै भण्डारबाट बाहिर तपाईंलाई आवाश्यक भएको वस्तुको साथ विकल्प हुनेछ। हिजो हिजो मैले बेड बाथ र पछाडि जूसर किनेको छु। मैले उनीहरूको बारेमा एउटा टोन अनलाइन पढें र कुनै एउटा साइटमा छुट पनि दिइयो ... तर म घर जान र त्यो बेलुका मेरो पहिलो गिलास भेजीको रस बनाउन चाहान्छु ... यसलाई एक हप्ताको लागि पनि राख्दिन।
शुभकामना रिटेल आउटलेट र अनलाइन बीचको मध्यम हुने आशा गर्दछ, दुबै संसारको उत्तम प्रदान गर्ने। यो रिटेल आउटलेटहरूको लागि उत्कृष्ट अवसर हुन सक्दछ जसले बिक्रीको गिरावट देखेका छन् उनीहरू योग्य अनलाइन ध्यान पाउन।
विशपन्डले तपाईलाई नजीकको पसलहरूबाट मनपर्दो उत्पादनहरू भेट्टाउँदछ। विशपन्डको स्थानीय शपिंग इञ्जिनले नजिकैको स्टोरहरू खोज्छ र शहरमा सब भन्दा राम्रो सम्झौताहरू खोज गर्दछ। अधिक डेलिभरी पर्खदैन, बढि शिपिंग लागतहरू छैन। तपाईं आज के चाहानुहुन्छ प्राप्त गर्नुहोस्।
तपाईंको जेबमा डिलहरू, जहाँ तपाईं जानुहुन्छ। हाम्रो आईफोन अनुप्रयोगले तपाइँको स्थानीय शपिंग शक्ति विस्तार गर्दछ। तपाईं उभिरहनु भएको स्थानको नजिक डिलहरू ट्र्याक गर्न अनुप्रयोग प्राप्त गर्नुहोस्, चाहे तपाईं सडकमा विन्डो किनमेल गर्दै हुनुहुन्छ वा घरको आरामबाट ब्राउज गर्दै हुनुहुन्छ।
एक इच्छा बनाउनुहोस्: मूल्यहरू पाउनुहोस् जुन तपाईंलाई मनपर्दछ। के तपाईको स्थानीय उत्पादन खोजले तपाईको लागि काम गर्न सक्छ? तपाईंलाई मनपर्ने उत्पादनमा विश गर्नुहोस्, र विशपन्डले तपाईंलाई सचेत गराउँदछ जब मूल्य घट्छ, त्यस्तै उत्पादनहरू भेट्टाउनुहोस् जुन तपाईंको इच्छित मूल्यसँग मेल खान्छ र नजिकको स्टोरहरूबाट निजीकृत डिलहरू पठाउँदछ जुन नजिकैको स्टोरसँग मिल्नेछ।
यो विशपन्ड व्यापारी केन्द्र स्थानीय खुद्रा विक्रेताहरु लाई सजिलै आफ्नो उत्पादन र सम्झौता प्रबर्द्धन गर्न सशक्त बनाउँछ, किनमेल गर्न पसलहरुलाई स्थानीय स्टोअर को छनौट गर्न को लागी एक राम्रो चयन।
सेवाको छोटो भिडियो यहाँ छ:
[यूट्यूब: http: //www.youtube.com/watch? v = UKP3-FIHtmU]
र यदि तपाईंलाई रिटेल परिवर्तन हुँदैछ भन्ने बारे कुनै श doubt्का छ भने, यहाँ ईशफन्डबाट केही महान तथ्या from्कहरू एक इन्फोग्राफिकमा छन् कि उनीहरूले कहाँ सहयोग गर्छन् वर्णन गर्दछन्।
मोबाइल फोन भुक्तानी प्रक्रिया